Kedu ka ihu igwe dị na Mediterranean | Netwọk Mgbasa Ozi
El Ihu igwe Mediterranean ọ bụ ọnọdụ ihu igwe dị oke mma nke oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ ma nke dị nro na mmiri oyi. Mpaghara niile dị na mpaghara Mediterenian nwere ihu igwe a, mana ọ dịkwa na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa, dịka California (United States).
Mmiri ozuzo dị oke ụkọ, ruo n'ókè nke ọnwa 3 ruo 6 nwere ike ịgafe na-enweghị nnukwu mmiri ozuzo. Ya mere, ụnwụ bụ nsogbu na-enye nsogbu n'obi, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ebe ọ naghị ada karịa 100-150mm. Chọpụta ihe ihu igwe Mediterranean dị ka.
1 Climatedị ihu igwe dị na Mediterranean
1.3 Oke Osimiri Mediterenian
2 Ndụ na agwaetiti
Climatedị ihu igwe dị na Mediterranean
Climograf nke Almería (Spain)
Typesdị ihu igwe anọ dị na Mediterenian dị iche, ndị bụ:
Ọ bụ nke ahụ e nyere na ezigbo akụkụ nke oke osimiri Mediterenian, belụsọ Egypt na akụkụ nke Libya na Tunisia. Ogologo okpomọkụ dị elu karịa 18ºC, na udu mmiri bụ iru mmiri na mmiri ozuzo, na udu mmiri na-akọrọ ma na-ekpo ọkụ (ọ nwere ike iru 38ºC na ebili ọkụ).
Na Spain, kpọmkwem na Catalonia, Balearic Islands na akụkụ dị mma nke Obodo Valencian, ha nwere ihu igwe a.
Ọ na-eme na mpaghara ndị dị anya site n'ụsọ oké osimiri, n'ihi na enwere iru mmiri dị ala. Igwe okpomọkụ dị na-apụta ihe. Enwere ike inwe oge oyi na frosts na udu mmiri dị nro, ma ọ bụ oge oyi dị nro na oge ọkọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu.
Mba dị ka Italy, Cyprus, Turkey, Lebanon ma ọ bụ n'ime ime Spain, ihu igwe a na-adị.
Ọ na-adị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian, na-adị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke nnukwu kọntinent. N'ebe a, oge okpomọkụ dị softer (30ºC ma ọ bụ obere) na kpọrọ nkụ na nke ahụkarị Mediterranean na-eme, na winters bụ karịa mmiri.
Ndịda Galicia, ụsọ oké osimiri California, mpaghara Perth na Adelaide dị n'Australia, bụ ụfọdụ n'ime ebe ndị a nwere ihu igwe.
Ọ bụ nke na-eme na mgbanwe n'etiti ihu igwe Mediterenian na ọzara. Ihe ejiri mara ya bu inwe onodu oku di elu karie 20ºC, inwe ike ịgafe 45ºC n'oge ebili ọkụ. Mmiri ozuzo dị ntakịrị, na-agbagharị n'etiti 200 na 400mm.
Na Spain ọ na - eme na Alicante, Almería na akụkụ dị mma nke Murcia. Ọ dịkwa na Gris, Morocco, Algeria, Libya, Israel, Tunisia, Australia, Portugal, Jordan, Chile, Syria na Mexico.
Ndụ na agwaetiti
Na mmeae bi a ɛbɛn Mediterranea Supɔw no so no, wosii apini. Osisi na anumanu aghaghi iguzogide oke okpomoku, dika enweghi mmiri ozuzo.
Ihe atụ ụfọdụ nke ndụ nke anyị nwere ike ịchọta bụ ndị a:
fauna: wolf, lynx, huhu hedehog, toad, ngwere, mbekwu Mediterranean, ugo nke alaeze ukwu.
Anyị nwere olile anya na ị mụtala ọtụtụ ihe gbasara ihu igwe a ious.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Kedu ka ihu igwe dị na Mediterenian
Ọnwa ọ na-ebute nnukwu ala ọma jijiji?